Xildhibaan ka digay in Mushaar la’aan Ciidamada uga soo baxaan furumaha dagaalka. – Kalfadhi
Ciidamo katirsan Milateriga Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay warbaahinta ka sheegay in ay ka soo bixi doonaan furumaha dagaalka ee Gobalka Shabeelaha Hoose kadib markii ay waayeen Mushaarkii iyo Garaamkii ay dowladda ku lahaayeen.
Askartaan ayaa sheegay in muddo 4 bil ah aysan qaadan Mushaar, sidoo kale waxay sheegayn in ay waayeen Garaamkii ay dowladda siin jirtay taasina ay sababtay in ay sii wadi waayaan shaqada Qaranka ee Difaaca dalka. “Mushaar ma qaadan 4 bil, Garaamkii waan waynay, Carruurtayna iyo Xaasaskayna waa laga soo saaray guryihii ay daganaayeen”, sidaas waxaa Warbaahinta u sheegay in laba kamid ah Ciidamada Soomaaliya.
Xildhibaan C/risaaq Maxamed Axmed (Jindi) oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan Guddiga Maaliyadda ayaa walaac ka muujiyay qayla dhaanta Ciidamada iyo aamusnaanta dowladda. Xildhibaanka ayaa sheegay in arintaan ay horseedi karto dhibaato kale oo amni hadii aan laga hortagin.
“Waan maqlay in Ciidamada aysan mushaar qaadan dhowr bilood, mana ogin sababta loo bixin waayay mushaarka laakiin waan cambaareynayaa”, ayuu yiri Xildhibaan C/risaaq Jindi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Madaxda Maaliyadda waxay noo sheegayn in mushaarka ugu horreeyo la siin doono Ciidamada, macquulna maahan in ilaa hadda aysan qaadan mushaar”, sidaas waxaa Kalfadhi u sheegay Xildhibaan C/risaaq Maxamed Axmed oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa sheegay markii uu furmo kalfadhigaan 5aad ee Golaah Shacabka ay xooga saari doonaan sidii lagu heli lahaa Xuquuqda Ciidamada Dowladda laguna xisaab tami doono Madaxda Dowladda Soomaaliya.
“Kalfadhigaan 5aad waxaan u yeeri doonaa Wasiirka maaliyadda iyo madaxda kale ee Qaranka waxaana ka rabnaa waxa hortaagan in la bixiyo mushaarka Ciidamada”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Jindi.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Muqdisho ku soo laabtay